ब्रिटेन व्यापार सम्बन्ध समाप्त हुने अमेरिकाको चेतावनी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ब्रिटेन व्यापार सम्बन्ध समाप्त हुने अमेरिकाको चेतावनी
बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रेक्जिट भनिने युरोपेली युनियनबाट ब्रिटेनको बहिर्गमन सम्बन्धी प्रधानमन्त्री टरिजा मेको योजनाअघि बढे संयुक्त अधिराज्यले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार सम्झौताहरू सम्भवत गर्न नसक्ने बताएका छन्।
उनले सन समाचारपत्रलाई दिएको अन्तरवार्तामा त्यस्तो योजना कार्यान्वयन भए सम्झौता गर्ने अवस्था अन्त्य हुने र अमेरिकाले ब्रिटेन नभई युरोपेली संघसँग सम्बन्ध कायम गर्ने टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्री मेले राष्ट्रपतिको रूपमा पहिलो पटक ब्रिटेन आएका ट्रम्पसँग अमेरिका ब्रिटेन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि कुराहरू राख्ने तर्क गरेका छन्।
उनले ब्रेक्जिट अमेरिका र सयुक्त राज्य अमेरिकामा आर्थिक वृद्धिको ढोका खोल्ने अवसर भएको टिप्पणी पनि गरेकी छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पूर्व ब्रिटिश विदेशमन्त्री बोरिस जोनसन उत्कृष्ट प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भन्दै उनीसँग त्यसका लागि चाहिने क्षमता भएको उल्लेख गरे।
ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनको ब्रिटेन भ्रमणलाई छायामा पार्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री मेले ट्रम्प र उनकी श्रीमतिलाई रात्रिभोज दिइरहँदा ब्रसल्समा लिइएको भनिएको पछिल्लो अन्तर्वार्ता छापिएको थियो।
ब्रिटेनले हाल प्रस्तुत गरेको इयु बहिर्गमनको योजना जनताले मतदानमार्फत व्यक्त गरेको धारणा भन्दा फरक रहेको ट्रम्पले उल्लेख गरे।